ရန်ပိုင်| January 21, 2013 | Hits:1,701
1 | | မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာ ကုန်တင် ယာဉ်ရပ်နား စခန်းသစ် (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး / ဧရာဝတီ)
တရုတ် ဘက်မှ ကြက်သား၊ ကြက်ဥ နှင့် နို့မှုန့်များ တရားမ၀င် တင်သွင်းနေ
UNICEF လိုပဲ WHO လည်း ရန်ကုန်ရုံးငှားခ တလ ဒေါ်လာ ၈ သောင်းခန့် ပေးရ
မြစ်သာမြစ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းရပ်ရန် ဒေသခံများ ဆန္ဒပြ
One Response	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website swe htwe January 22, 2013 - 12:33 am	If the goverment really wants to decrease unnecessary costs,the price should be review. This price is the burden for all.